Cristiano Ronaldo ayaa hormood ka noqday xiddigaha dunida ee muujinaya murugada iyo sida ay uga xun yihiin inuu dunida ka tegay halyeygii reer Argentina ee Diego Maradona oo wadne xanuun kusoo booday ugu geeriyooday waddankiisa.
Xidhiidhka kubadda cagta Argentina ayaa xaqiijiyey in Diego Armando Maradona uu geeriyooday.
Baraha bulshada ayay qabsatay tacsida xiddigaha kubadda cagta, haleeyadii hore ee ka fadhiistay, tababareyaasha iyo shaqsiyaadka caadiga ah ee ay taageereyaashuna dheer yihiin ee tacsida u diraya qoyska uu ka geeriyooday Diego Maradona.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa Diego Mardona ku tilmaamay mucjisadii kubadda cagta ee aan dib loo heli doonin qof buuxiya booskiisii.
Farriin uu ku daabacay bartiisa Instagram ayuu ku yidhi: “Maanta, waxa aan macasalaamaynayaa saaxiibkay, duniduna waxay sagootiyeysaa caqligii cajiibka ahaa. Mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsanaa iyo mucjisadii aanay jirin cid lala barbar-dhigi karayo.
“Si degdeg ah ayuu ku tegay, laakiin waxa uu ka tegay taariikh aan xaddidnayn, waxaanu innagu banneeyey meel aan la buuxin doonin. Nabad ku naso, xiddigoow. Waligaa laguma illoobi doono.”
Halyeygii reer Brazil ee Pele ayaa isaguna bartiisa Twitterka farriinta tacsida soo dhigay, waxaana uu kusoo lifaaqay sawir ay ku wada jiraan.
Pele ayaa qoraalkiisa ku yidhi: “Alla warku naxdin badanaa. Waxaan waayey saaxiib wanaagsan, duniduna waxay weyday halyey. Wax badan ayaa laga sheegay, laakiin hadda, waxaynu qalbi adayg ugu ducaynaynaa qoyskiisa.”
Pele waxa kale oo uu sharraxay hal arrin oo uu ku riyoon jiray, waxaanu yidhi: “Maalin, ayaan rajaynayaa inaynu kubadda cagta ku wada ciyaari doono cirka sare.”
Jose Mourinho, Kylian Mbappe iyo Gary Lineker ayaa iyaguna ka mid ah dadka caanka ah ee sida qiirada leh uga hadlay geerida.